Tag: dukaameyso | Martech Zone
Jimco, Febraayo 18, 2022 Isniin, February 21, 2022 Douglas Karr
Waxaan u dhisnay goob Shopify Plus macmiil leh dhowr habayn oo qaabkooda ku jira faylka mawduuca dhabta ah. In kasta oo ay taasi runtii faa'iido u leedahay in si fudud loo habeeyo qaababka, waxay la macno tahay inaadan haysan fayl qaab-dhismeedka cascading style (CSS) oo aad si fudud u yareyn karto (yaraynta cabbirka). Mararka qaarkood tan waxaa loo tixraacaa sida CSS isku-buufinta iyo isku-buufinta CSS-gaaga. Waa maxay CSS Minification? Markaad wax ku qorayso xaashida qaabka,